आरक्षणबाट खस आर्य हटाउन दिएको इयुको सुझावप्रति सरकारको कडा आपत्ति ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
आरक्षणबाट खस आर्य हटाउन दिएको इयुको सुझावप्रति सरकारको कडा आपत्ति !
काठमाडौ । सरकारले नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक बोलेको भन्दै युरोपियन युनियन (ईयू) ले दिएको निर्वाचन पर्यवेक्षणसम्बन्धी अन्तिम प्रतिवेदनमा आपत्ति जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै ईयूले प्रतिवेदनमा दिएका अधिकांश सुझावप्रति असहमति प्रकट गर्दै प्रतिवेदन तत्काल सच्याउन आग्रह गरेको छ ।
निर्वाचन पयवेक्षणका लागि नेपाल आएको ईयूको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले मंगलबार आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको जातीय संरक्षणसम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको प्रभाव समीक्षा गर्दै खसआर्यको आरक्षण खारेज गर्न सुझाइएको छ । प्रतिवेदनका अधिकांश बुँदा चित्तबुझो नरहेको परराष्ट्रको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले यस विषयमा बुझ्न ईयूका राजदूतलाई नै बोलाउने तयारी गरे पनि उक्त धारणा राजदूतभन्दा माथिल्लो तहबाट आएकाले वक्तव्य जारी गरेको हो । ईयूले नेपालको आन्तरिक मामिलामा बोलेको यो पहिलोपटक भने होइन । अघिल्ला राजदूत रिन्छे टेरिन्कलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफ्नै निवासमा बोलाएर जथाभाबी बोलेको भन्दै हकारेका थिए । नेपालको जातीय सन्दर्भमा ईयू पटकपटक विवादमा तानिँदै आएको छ ।
मतदाताको उत्साहपूर्ण सहभागितामा शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न निर्वाचनबारे ईयूले संविधानमै असर पर्ने अभिव्यक्ति दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘समावेश गरिएका समूहबाट खस आर्यलाई हटाउने,’ प्रतिवेदनमा सुझाव खण्डको पहिलो बुँदामै उल्लेख छ । नकारात्मक विभेद भोगेका समूहलाई मात्र सकारात्मक कार्यसम्बन्धी उपायहरु लागू हुने सुनिश्चित गर्न यस्तो सुझाव दिएको ईयूको तर्कप्रति पनि सरकारले असहमति प्रकट गरेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस सरकारकै कारण पाइपलाइन विस्तार ढिला, नीतिगत समस्या समाधान नगर्दा समस्या !
८,चैत्र.२०७४,बिहीबार ०८:०० मा प्रकाशित
← विश्व बैंकले छब्बीस अर्ब ६० करोड ऋण दिने, कति पुग्याे ऋण ?
आईजीपी बन्न-बनाउन दौड सुरुः बादल खनालको पक्षमा, प्रधानमन्त्री ओली समक्ष प्रचण्डको अडान ! →